घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Bafetimbi Gomis बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत छ उपनाम द्वारा सबै भन्दा राम्रो परिचितकाला Panther“। हाम्रो Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको मितिमा उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता तपाईं समक्ष ल्याउँदछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र अन्य धेरै अफ-पिच तथ्यहरू (थोरै ज्ञात) अघि उनको जीवनको कथा समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो डरलाग्दो लक्ष्य उत्सव शैलीको बारेमा थाहा छ। जबकि, केहि थोरैले Bafetimbi Gomis 'बायो मा विचार गर्छन् जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
Bafetimbi Gomis मा जन्म भएको थियो6को 1985th दिन उनको आमा (एक गृहिणी) र बुबा (menial सार्वजनिक कार्यकर्ता) लाई, फ्रान्सको कम्यून La Layne-sur-Mer मा।
सेनेगल जडहरु बाट गोमिस जो 10 बच्चाहरु को एक ठूलो परिवार बाट आउँछ, सबै जो उनको साथ तल चित्रित आमाबाबु को आशिष् को रूप मा आयो।
बाफे, जसलाई उनी लोकप्रिय भनिन्छ, दक्षिणी फ्रान्सको भूमध्यसागरीय तटमा बन्दरगाह शहर, टुलनमा हुर्केका थिए। उनका अभिभावकहरू अशिक्षित अभिभावक हुन् जो पढ्न र लेख्न जान्दैनन् तर उनीहरूको मेनुअल जागिरसँग धेरै सहज छन्। त्यसको कारणले गर्दा, बाफटेम्बीले एक पटक भने;
हुर्कदै, मेरो आमा बुबा को लागी शुरू देखि मेरो होमवर्क निरीक्षण गर्न गाह्रो थियो। जब तपाइँले काम गर्नुपर्दछ, बिहान o'clock बजे उठ्नुहोस्, धेरै ढिलो फिर्ता आउनुहोस्, र त्यसमाथि तपाइँसँग धेरै बच्चाहरू छन्, यो गाह्रो छ।
Bafetimbi Gomis अझै पनि आफ्ना आमाबाबुहरूको सराहना गर्ने सेनेगल देखि फ्रान्स सम्म सबै जन्म को लागि उनको जन्म दिन को लागि माइग्रेट "जीवनमा एक पटकको मौका".
Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको यात्रा
गोमिस १ 14 बर्षसम्म आफ्नो बुबाको हेरचाहमा थिए जब उनले स्थानीय फुटबल खेले जुन उनको जवानीमा केही पाएनन्। बुबाले बिलहरू भुक्तान गर्दा र खेलकुदका सामानहरू किन्नु भएता पनि उनी कहिलेकाहीं आफ्नो छोरासँग तालिम मैदानमा पनि जान्थे किनभने ऊसँग ड्राइविंग परमिट थिएन। Gomis अनुसार;
मेरो सपना मेरा आमा बुबालाई घर किन्नु थियो। त्यो मेरो एक मात्र उद्देश्य थियो। दिनभर काम गरिसकेपछि बुबाले नौ तल्लामा चढाएको देख्दा यो पीडादायी छ, मोटरसाइकलमा घर यात्रा गर्न किनभने उहाँसँग ड्राइभर इजाजतपत्र छैन। कहिलेकाहिँ लिफ्टमा पसाब पनि आयो जहाँ ऊ अडी भयो। यो धेरै गाह्रो थियो।
उहाँले कमाउँदै सुरु गर्दा: २००१-२००२ मौसमको बेला १ 15 वर्षको उमेरमा, बाफेले सेन्ट-एटिएन्नेको युवा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरे। यो समय उनले फुटबलमा पैसा कमाउन शुरू गरे। २०० 2001 सम्म, गोमिस क्लबको युवा वर्गको शीर्षमा उक्लिसकेका थिए र उनको वरिष्ठ फुटबल शुरू गर्नका लागि तयार मानिए। यो त्यस्तो समय थियो जब उनी साहससित बोल्न पुग्नु आफ्नो बुबाहरूसँग गए;
"रोक्नुहोस्, तपाई राम्रो हुनुहुन्छ तर बिल म भुक्तानी गर्ने म हुँ, त्यसैले तपाईले काम गर्न छोड्नुभयो!"
यो 2006-07 सीजनको समय थियो जब गोमिसले सेन्ट-एटिएनसँग टोलीका लागि goals० गोल दागेर लियोनमा सर्नु भन्दा पहिले 40० गोल गरे।
लियोन मा, बफेटिमिबी को लागि रेकर्ड मिलयो सब भन्दा छिटो च्याम्पियन्स लिग ह्याट्रिक छ, स्वामित्व स्वामित्व रेकर्ड धक्का माइक नेवेल। यसले स्वानसिया शहरलाई उनीमा चासो राख्यो एक समय जब ऊ सम्झौताको अभावमा पुगेको थियो र लियोनमा रहन समस्या भयो। वेल्श क्लब भाग्यले उहाँलाई एक निःशुल्क स्थानान्तरण मा मिल्यो। वेल्स जानु अघि स्वानसी एएफसी खेलाडीहरू नचिनेकाले, बाफेटिम्बी गोमिसले प्रयोग गर्नुपर्‍यो "फुटबल प्रबन्धक"स्वानसीया प्लेयरहरूको अनुसन्धान गर्न। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
बफेटिमी गमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- शैक्षिक शम
Bafetimbi Gomis एक पटक थाहा पाएको छ कि उनले सधैं "लाज"र"कमजोरी"शिक्षा को कमी को कारण आफ्नो कैरियर मा शुरुवात। स्ट्राइकरले आफ्नो आमाबाबुलाई विशेष गरी उनीहरु माम (तल चित्रित) ले उनको सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो क्यारियरको निर्देशन दिएका थिए।
त्यस्ता मध्ये एउटा त्यस्तो शिक्षा हुनु पनि हो जुन उसले क्रुद्ध भई अस्वीकार गर्‍यो, जसले गर्दा यसलाई उसको सबैभन्दा ठूलो अफसोस भयो। बाफको शब्दहरूमा;
त्यहाँ समस्याहरू छन्, अक्सर, उदाहरणका लागि जब तपाईं एक जना जवान व्यक्तिलाई स्कूल जाने जान्नुहुन्छ र उसले आफैले देख्नुहुन्छ पहिले नै आफ्नो शिक्षक भन्दा अधिक कमाई, फुटबलको लागि धन्यवाद।
यो, बिना सायद, Bafe को लागि चीजहरूको अर्डर बाधा भयो। त्यहाँ पनि त्यस्ता घटनाहरू छन् जसमा तिनका आमाबाबुले उहाँमाथि सबै नियन्त्रण गुमाएका थिए किनभने तिनीहरू उनीहरूको एकमात्र प्रदायक थिए। एक समयमा शिक्षामा शून्य लगानी थियो त्यहाँ उनले यो भन्दा आवश्यक थियो। तिनका शब्दहरूमा
यदि मसँग एक अफसोस छ, यो मेरो शिक्षा मा १००% लगानी गर्न सक्षम छैन। मेरो बुबा धेरै समयदेखि यसका बारे मसँग रिसाउनुभएको थियो। तर ऊ केहि बोलेन किनकि मैले घरलाई खाना खुवाएँ र मेरा अन्य भाइबहिनीहरूका लागि स्कूल शुल्क तिर्नुभयो। १० बर्ष पछि मैले आफ्नो स्कूली शिक्षा बन्द गरें। आज, मलाई आफैंलाई व्यक्त गर्न गाह्रो भयो।
लेख्ने समयमा जस्तै, बाफेको बुबा अब हुनुहुन्न। यद्यपि, उनको शिक्षा र उनका शब्दहरू अझै पनि उनको मुटुमा रहन्छन्।
आफ्नो बुवाको इच्छा पूरा गर्दै: उहाँ 30० वर्षको उमेरमा उमेरले सोच्ने प्रतिबिम्बको रुपमा चिनिनुभयो, बाफेले आफ्नो बुढेसकालको एक इच्छा पूरा गर्न वयस्कको रूपमा अध्ययन गर्न थाले। उनले बाकको लागि अध्ययन सुरु गरे (फ्रेन्च ए-लेवल समकक्ष)। दुर्भाग्यवश, उहाँले दुई तथ्याङ्क दावी गर्नुभएको कारणले यो पारित गरेन। पहिलो, त्यो उनको छोराको जन्म थियो र त्यसपछि, उनी र लियोनबीचको विवाद थियो। गरीब बफेको लागि अफसोस जारी छ।
बफेटिमी गमोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
Bafe को लागि, उनको रिजर्व केहि समय देखि उनको केहि मतलब छ जो क्षण देखि केहि पनि नहीं मतलब थियो। लेखनको समयमा, ठोस फुटबलमा एक अंतरजातीय सम्बन्ध बिफे र तिनकी पत्नी (अज्ञात नाम) को बीचमा अवस्थित छ जुन उनीहरूको पहिलो बच्चा र छोराको साथ तल चित्रण गरिएको छ।
तल चित्रमा चित्रित रूपमा, बफे दुई बच्चाको मानिस हो। उहाँले सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दछ जुन मानिस आफ्नो परिवारको लागि गर्नु पर्छ। तिनीहरूको लागि त्यहाँ हुन।
आफ्नो छोराको साथ अद्भुत क्षणहरू एक प्रतिज्ञा जस्तो हो जुन उसको जीवनको लागि सब भन्दा राम्रो साथी हुनेछ। बाफका लागि उनका बुवाको पालाबाट पाएको सुन्दर सम्पदा बुबाको भूमिकामा अभिव्यक्त हुन्छ।
को रूप मा उनको छोरा को स्मृति बैंक मा बफी जमा दोस्ती को रूप मा, उनको मानिन्छ कि उनको लड़का उनको उदाहरण को पालन गर्नेछन् कि, जहां उनको फुटबल कैरियर खत्म हो किन देखि।
Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -आक्रमणहरू
के तपाईंलाई थाहा थियो?… बाफे भासोभगल आक्रमणबाट ग्रस्त छन् जसले उसलाई होस हराउँदछ जब ऊ तनावग्रस्त हुन्छ। जहाँसम्म हामीले देख्यौं कि उनी आफ्नो फुटबल खेल्दा चार पटक बेहोश भए।
Vasovagal हमलाहरूको बारेमा: निश्चित ट्रिगरहरू जस्तै तनाव वा तातो तापमानले यो आक्रमणको कारण बनाउँछ। Bafe को लागि, यो आफ्नो हृदय दर धीमी हुन्छ, रक्तचाप र एक दिमागमा बह्ने रक्त मा ड्रप को कारण बनता छ जो चेतना को हानि को लागी। तल यस्तो डरलाग्दो क्षणहरू मध्ये एक भिडियो देखाइएको छ;
Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
Bafe एक बहुमुखी व्यक्तित्व छ। जब उनको आफ्नो मूंछको रूप मा देखेको छ भने उसको उपस्थिति परिवर्तन गर्न चयन गर्दछ, बफीले उनको अनुहारको एक्लो बालबालिकालाई धन्यवाद।
अर्को कुरा तपाईंले फ्रान्सेली जन्म भएको सेनेगालिसको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ कि माथिको फोटोमा देखिएजस्तो अप्ठ्यारो लुगाको उसको धनी र विविध इतिहास हो।
कहिलेकाँही यो फुटबलको बारेमा सबै कुरा हुँदैन, बाफे एक जिम्मेवार वयस्क हुन् जसले राम्रो दन्त स्वच्छताको महत्त्व जान्दछन्।
माथीको फोटोले के हुन्छ भने जब बाफे उसको हेडब्यान्ड बिना फुटबल खेल्छ।
बफे निश्चित रूप देखि एक व्यक्ति हो जसले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो भावनात्मक आवश्यकताहरु को रूप मा देख्न को लागी प्रशंसा को लागी प्यार गर्दछ। ट्विटरमा तल साझेदारी गरिएको छ, उनी टर्की होटेलले उहाँलाई दिएको आतिथ्यको कदर गर्दछ जहाँ उनी र तिनका परिवारले देशमा घरघरको घर बिक्री गर्नुअघि महिनाको लागि बाँकी रहे।
बाफेले एक पटक आफ्नो शब्द राख्यो र उनको कपाल काटेर फ्यानहरूलाई वचन दिन्छ। रिपोर्टका अनुसार उनले कम्बलले लिगको उपाधि जितेमा उनले कपाल काट्ने प्रतिज्ञा गरे र २०१ 2017/२०१ season सत्रको सुरूमा उनले आफ्नो क्यारियर गोल रेकर्ड तोड्यो। यी सबै भयो। आफ्नो शब्दलाई सत्यमा राख्दै, बाफेले पछि आफ्नो सोशल मिडिया खातामा कपाल काट्ने तस्वीर पोस्ट गरे।
Bafetimbi Gomis बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -लक्ष्य समारोह
Bafetimbi Gomis गोल उत्सव शैली फुटबल मा अस्तित्वमा रहेको डरावना चीजहरु मध्ये एक हो। निस्सन्देह प्रशंसकहरूतर्फ राक्षिक रूपमा क्रल गर्ने उनको कार्यले कुनै श .्कास्पद सपनाहरू देखाउँदछ।
उनको उत्सवको इतिहास वा अर्थ अहिलेसम्म थाहा छ। यद्यपि, केही प्रशंसकहरूको लागि, यसलाई सामान्य हेर्दै मानव को लागी गम्भीरतापूर्ण रूपमा देखा पर्दछ जुन अचानक आफ्नो हातमा घुम्न थाल्यो र गल्लममा अनिवार्य रुपमा अगाडि बढ्छ। अंगूठियहरुको प्रभु.
कस्तो प्रशंसकले भने: (i) यो लाग्छ यदि तपाईं लामो समयको लागि तस्वीरमा हिंड्नु हुन्छ भने, उहाँ जीवनमा आउनुहुनेछ र तपाईंको प्राण खाउनुहुन्छ। (ii) त्यो तस्वीर देख्न पछि, यदि तपाईंलाई आफ्नो परिवार गले लगाउनु आवश्यक छ वा आमालाई मात्र उनीहरूलाई थाहा छ कि तपाइँ तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईं ठीक हुनुहुन्छ भनेर बोलाउनुहुन्छ, त्यो बुझ्न योग्य छ. (iii) मलाई थाहा छ कि लक्ष्य गोल गर्दै उत्सव मनाउने केहि चीज हो। तर गमोसले यो प्रयास गर्नु हुँदैन र संसारभरि लाखौँको रातोपहरमा आफ्नो मार्ग बनाउँदैन।
त्यसपछि पछि, उनको ल्योन दिनहरूमा, बफीले आफ्नो राक्षस उत्सवको अनुकूल मित्रको रूपमा विशेष गरी बच्चाहरुका लागि।
Fअधिनियम जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Bafetimbi Gomis बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!